NOSY BE HELL-VILLE : Mitaraina ho iharan’ny fanararaotam-pahefana ireo mpampiasa botry
Velon-taraina ankehitriny ireo mpampiasa botry any amin’ny faritra Nosy Be noho ny fanararaotam-pahefana atao amin’izy ireo. 18 mai 2021
Araka ny voalazan’ireto farany dia tompon’ andraikitra voalohany eo anivon’ny CNRO sy tale ao amin’ny APMF any an-toerana no manararaotra maka vola mitentina iray tapitrisa Ariary isaky ny botry mpitatitra fasika sy izay olona na mpandeha tratra ao anatiny. Araka ny fahitan’ireo lasibatry misy tetika sy firaisana tsikombakomba eo amin’ireo tompon’andraikitra roa tonta amin’izany fitakiana vola izany. « Miezaka manara-dalàna izahay. Saingy ny mahagaga dia tazomin’ny talen’ny APMF any aminy ireo antontan-taratasy ilaina na dosie momba ny fahazoan-dalana sy ny hafa. Mbola ity tompon’andraikitra ity ihany no mampahafantatra ny eo anivon’ny CNRO fa tsy manara-dalàna izahay. Iniany atao, araka izany, ny tsy famoahana ny taratasinay mba hahazoana vola aminay. Misy tetika maloto eo amin’ireto tompon’andraikitra ireto ary izahay no lasibatra amin’izany », hoy ireo mpampiasa botry any an-toerana tafaresaka tamin’ny mpanao gazetinay. « Tsy vitan’izany fa iharan’ny fandrahonana maro isan-karazany izahay raha tsy manome vola. Tsy izahay velively no tsy manaiky hanara-dalàna fa atao ny fomba handikanay lalàna », hoy hatrany ireto farany.
Manoloana izany toe-javatra izay dia mangataka ireto mpampiasa botry ireto ny hanesorana ireo tompon’andraikitra mpambotry sy mpanao tsindry hazolena azy ireo, ka manao izay tiany hatao sy sahy manararao-pahafena satria mihevi-tena ho misy mpiaro. Milaza fa misy mpiaro ny tompon’andraikitra ao amin’ny CNRO. Jeneraly iray ao amin’ny Primatiora sy tompon’andraikitra iray eo anivon’ny CIS araka ny loharanom-baovao akaiky ity farany no miaro azy. Nomarihin’ny tompon’andraiki-panjakana sasany ao an-toerana rahateo izany.
Manao antso avo amin’ny fitondrana mahefa isan’ambaratongany ary indrindra ny Bianco izy ireo ny mba hijerena sy hanarahana akaiky ity raharaha ity. Nanamafy izany koa ny tompon’andraiki-panjakana sasany any an-toerana, izay nilaza fa efa maro ny fitarainana tonga eny anivon’ny CIS mahakasika ny fanararaotana ataon’ireo tompon’andraikitra voalaza ireo nefa tsy misy tohiny. Asa aloha fa tsara raha misy fanadihadiana ataon’ny tompon’andraikitra ambony fa indrindra ny minisitera mpiahy momba izao raharaha izao.
Nampalaza ity faritra ity tato ho ato ny fanondranana olona an-tsokosoko mivoaka any ivelany ary raha tsiahivina vao haingana teo dia voalaza fa mpiasa avy eo anivon’ny APMF no voarohirohy tamin’ny resaka fitaterana olona an-tsokosoko mankany Mayotte ary efa nidoboka am-ponja mihitsy amin’izao fotoana izao ny sakaizany.